टेस्ट स्पीड बढाएर लकडाउन खोल्नुपर्छ नत्र ……. – Tourism News Portal of Nepal
टेस्ट स्पीड बढाएर लकडाउन खोल्नुपर्छ नत्र …….
काठमाडौं–केही महिनाभित्रै नियन्त्रणमा आउने अपेक्षा गरिएको कोरोना भाइरस सात महिना बितिसक्दा पनि झन् दैनन्दिन बढ्दै गइरहेको छ । सुरुवाती चरणमै हल्का रुपमा लिनाले अहिले अनियन्त्रित अवस्था आएको हो । पूरै विश्व कोरोना संक्रमणबाट प्रभावित बनेको छ ।
सबै व्यापार व्यवसायहरु ठप्प छन्, खाद्यान्न र औषधिबाहेक । यतिबेला पनि केही कमाउने भने कमाएकै छन् । तर पनि अधिकांश औधोगिक क्षेत्रहरु ठप्प हुँदा सबैतिर यसको नराम्रो प्रभाव परेको छ । केही समयमै नियन्त्रणमा आउला र फेरि पुरानै तरिकाले आफ्नो काम अघि बढाउँला भन्नेहरु अहिले महिनौंदेखि घरभित्रै थन्किएका छन् ।
कोरोनाले सुरुमै प्रभावित बनाएको क्षेत्र पर्यटन नै हो । सबैतिर आवतजावत बन्द भएपछि महामारी फैलिएको महिनाभित्रै सबै पर्यटकीय गन्तव्यहरु सुनसान भए । फेरि नेपाली पर्यटनको त मुख्य सिजन नै चैत्रदेखि असारसम्म हो । यसपालीको सिजन कामविहीन नै भयो ।
जसकारण अर्बौं रकम लगानी गरेका व्यवसायीहरु अहिले घरभाडा र बैंकको ब्याज पनि तिर्न नसक्ने अवस्थामा छन् । त्यसपछि नेपालको होटल व्यवसाय बढी प्रभावित बन्यो । सबै मानवीय चहलपहल ठप्प भएपछि ट्रान्जिट पर्यटकहरुको संख्या पनि शून्न्य नै भयो ।
कोरोनाले थिलोथिलो पारेको पर्यटन र होटल व्यवसायलाई माथि उकास्न के गर्नुपर्ला भनेर हामीले सुरुवातीदेखि नै यस क्षेत्रका व्यवसायी र सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिसँग छलफल गर्दै आएका छौं । आजको शृंखलामा पर्यटन तथा होटल व्यवसायी छिरिङ नेक्याप लामासँग कुराकानी गरेका छौं ।
टेस्ट स्पीड बढाऔं
हामीले यस्तो अवस्था आउला भन्ने कहिले सोँचेका थिएनौं । यदि यस्तो अवस्था आउँछ भन्ने थोरै भए पनि आभास भइदिए हामी पूर्वतयारी अवस्थामा रहन सक्थ्यौं । एक्कासी आएको महामारीले थोरै भए पनि काम गरेर केही कमाउँला भन्ने सोँचेका म जस्ता व्यवसायी अहिले धराशाही हुने अवस्थामा पुगेका छौं ।
अझै केही महिना लकडाउनमै रह्यौं भने त हामीले तालाजाबी लगाएर घर फर्किनुको विकल्प छैन । मासिक लाखौं रुपैयाँ कर तिर्ने व्यवसायीलाई यतिबेला सरकारले केही हेर्नुपर्ने हो । तर, सरकार आफ्नै कुर्सी तानातानमा व्यस्त छ । अब त नयाँ आउने व्यवसायीलाई पनि लगानी गर्न त्रसित हुनुपर्ने स्थिति पैदा भएको छ ।
केही गरी कोरोना अन्त्य भए पनि नयाँ लगानीकर्ताहरु आउनसक्ने सम्भावना छैन । त्यसैले अब सरकारले लकडाउन मात्रै गरेर हुँदैन । लकडाउनले मात्रै संक्रमण रोक्न त सक्दैन भन्ने पुष्टि भइसकेको छ । केही दिनयता संक्रमितको संख्या घट्दो क्रममा । साँच्चीकै नियन्त्रणमा आउँदै हो वा टेस्ट कम भएर हो ।
अब सरकारले पीसीआर टेस्टको दायरा बढाएर सबैलाई सुरक्षित बनाउनुपर्छ । टेस्टको दायरा बढाउने र सुरक्षित क्षेत्र तोकेर लकडाउन खुलाउँदै जानुपर्छ । आखिर अहिले सरकारले होटल व्यवसायका लागि प्रोटोकल लागू गरेकै छ । सबै क्षेत्रमा यस्तै प्रोटोकल लागू गरेर अन्य व्यवसायहरु पनि खुलाउँदै जानुपर्छ । नत्र हामी नराम्ररी उठ्न नसक्ने स्थितिमा पुग्ने निश्चित छ ।
घरबाडा र बिजुलीको बिल पनि तिर्न नसक्ने भइयो
चैत्रदेखि नै सम्पूर्ण होटल व्यवसायहरु बन्द छन् । अहिले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि लागू हुनेगरी आन्तरिक पर्यटनको फरक नीति पनि ल्याएको छ । तर, काठमाडौं उपत्यकाको हकमा त्यतिले मात्रै हुँदैन ।
हाम्रा पर्यटकीय गन्तव्यहरु सुरक्षित बनाएर अन्तर्राष्ट्रिय उडान खुला गर्नुपर्छ ।
बाह्य पर्यटक नआएसमम राजधानीका होटलहरु माथि उस्किन सक्दैनन् । अलिअलि भए पनि ट्रान्जिट पर्यटकले केही राहत भएको थियो । तर, अहिले यातायात सबै बन्द हुँदा त्यो पनि छैन । लामो समयदेखि व्यवसाय गर्न नपाउँदा अहिले त घरभाडा र बिजुलीको बिल तिर्न पनि नसक्ने भएको छ ।
यस्तोबेला सरकारले राहतका कार्यक्रमहरु ल्याउनुपथ्र्यो तर, ल्याउन सकेको छैन । हामीले पटक–पटक राहतमा पैसा नै नदिए पनि व्यवसाय जोगाइराख्न सकिने अरु उपायबारे विकल्प दिन आग्रह गरेका छौं । तर, न त पर्यटन मन्त्रालय नै गम्भीर छ, न सरकार नै ।
बैंकले किस्ता मागेर हैरान
अधिकांश व्यवसायीले बैंकबाटै ऋण लिएर व्यवसाय सुरु गरेका छन् । लामो समयदेखि व्यवसाय ठप्प हुँदा घरभाडा पनि तिर्न सकेका छैनन् । यस्तो अवस्थामा बैंकले पनि किस्ताका लागि ताकेता गरेका छन् । दैनिक बैंकबाट आउने फोनका कारण तनाव उत्पन्न भएको छ ।
उनीहरुले हाम्रो स्थिति देख्दैनन् । मात्र किस्ताका लागि तारन्तार फोन आइरहन्छ । केहीले त फोन नै अफ गर्नुपर्ने स्थिति पनि आएको छ । यतिबेला कम्तिमा पनि सामान्य नहुँदासम्म किस्ता होल्ड गर्ने नीति सरकारले लिन सकेको भए हाम्रो व्यवसाय कोरोनापछि पनि जोगाइराख्न मद्दत मिल्थ्यो नि । अहिले त कामदारलाई नै रकम दिन सकिएको छैन । बैंकको किस्ता तिर्ने कसरी ?
बरु होटलमा एक कोठमामा एकै परिवारका भए दुईजना नत्र एक जनामात्र राख्नेगरी खुलाइदिए पनि हुने थियो । हामी पनि सुरक्षाका उपायहरु अपनाउँछौं । अब त मानिसहरु पनि आफैं सचेत भइसकेका छन् । उनीहरुलाई पनि संक्रमणको त्रास छ नि । बरु स्वास्थ्य सुरक्षाका उपायबारे कडाइ गरेर लकडाउन खोल्न सक्यो भने हाम्रो व्यवसायमात्र होइन, देशको अर्थतन्त्र नै विस्तारै चलायमान हुन्थ्यो कि !